शिव श्रेष्ठको छोरा शक्तिसँग करिश्माकी छोरी कविताको प्रेम ! (भिडियाे) « Janata Samachar
शिव श्रेष्ठको छोरा शक्तिसँग करिश्माकी छोरी कविताको प्रेम ! (भिडियाे)
प्रकाशित मिति : 16 May, 2018 2:33 pm
काठमाडौं । पुराना अभिनेता शिव श्रेष्ठका छोरा शक्ति श्रेष्ठ र करिश्मा मानन्धरकी छोरी कविता मानन्धरको प्रेम कहानीले पछिल्लो समय नेपाली मिडियामा स्थान पाउन थालेको छ ।
शिब श्रेष्ठ आफैं प्रस्तुतकर्ता रहेको चलचित्र “यस्तो एउटा प्रेम कहानी” मार्फत शक्ति र कविताले डेब्यू गर्दैछन् । यही चलचित्रको टिचर सार्वजनिक भएसँगै उनीहरुको चर्चा हुन थालेको हो । मल्टि स्टारले भरिएको भनिएको यस चलचित्रमा शिब श्रेष्ठ,प्रियंका कार्की,आयुश्मान देशराज श्रेष्ठ,संन्जोग कोईराला,बर्षा राउत,नरेन खड्का लगायतको पनि अभिनय रहेको छ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ३९ बर्ष बिताएका बरिष्ठ कलाकार शिब श्रेष्ठ लामो समय पछिचलचित्रमा फर्किएका हुन् । केहि बर्ष अघि बाग्मती चलचित्रमा अभिनय गरेका श्रेष्ठको उक्त चलचित्र सुपर फ्लप भएको थियो ।
टिजर सार्वजनिक कार्यव्रmममा उपस्थित नायिका करिश्मा मानन्धरले शिव श्रेष्ठले शुरुमा चलचित्रको प्रस्ताव गर्दा आफ्नालागि गरेको सम्झेर ओके भनिदिएको बताइन् । तर शिवले आफ्नोलागि नभई छोरी कविताकोलागि प्रस्ताव गरेको भनेपछि आफू सरप्राईज भएको स्मरण गराइन् । शिवको प्रस्तावपछि छोरी कविताको इच्छा अनुसार नै चलचित्रमा काम गर्न अनुमति दिएको आमा करिश्माले बताइन् ।
चलचित्रमा मिथिला शर्मा,बसुन्धरा भुषाल,रेखा फागो,बिष्णु चेम्जोङको पनि अभिनय रहेको छ । चलचित्रलाई शिवश्रेष्ठ आफैंले लेखेका हुन् भने दिनेश दर्शनधारी र यसोधा राईको निर्माण रहनेछ । चलचित्रको निर्देशन दिपेश सापकोटाले गरेका छन् ।